Mihetsika ny rindrina
Kiboriny & Other
TOA IZAO REHETRA
Hollywood Vanity Mirror, Style Makeup Mirrors amin'ny fanazavana, na Wall Tabletop tsoavaly
Hollywood Vanity Mirror WITH fanazavana
Ny BEAUTME Hollywood Vanity Mirror no maoderina traikefa-zava-poana ny Slim sady tsara tarehy nefa glamorous izay manome endrika tonga lafatra, dia manazava sy ambony fitaratra fandinihana mazava. Tena tsara ho an'ny fampiharana makiazy na oviana na toe-javatra, an-trano na ny matihanina-koa fa noho ny fandraisany tanteraka Instagram selfie!
TABLETOP / WALL nitaingina Mirror
Roa karazana Using- 1) Ataovy ny makiazy fitaratra eo amin'ny latabatra; 2) Hang ny km rror amin'ny thewall
Ampiasao makiazy fitaratra eo ambony latabatra
Vanity fitaratra lamba teo amin'ny rindrina
Professional Vanity Mirror amin'ny Jiro mifidy ny mazava fanakatonana ny fahazavan 'ny andro, mba hahatakatra tsara kokoa ny ambaratongam-alokaloka. High quality vita tamin'ny toe aluminium, mafy, mafy orina sy varnished tinplate rafitra vy sady ratsy mamela azy hijanona matanjaka eo amin'ny latabatra. Splicing miray volo malamalama toe mahatonga ny fitaratra avo kokoa-kilasy sy ny tsara tarehy.
Save herinaratra, lamaody sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Smart Touch PO
1. Touch moramora, mba hiala tamin'ny / vonoy ny hazavana mafana / andro mazava.
2. Hahazo ela mikasika hanitsy ny jiro mamirapiratra.
Hery: 100-240V, DC12V / 1A plug-in adaptatera
Jiro LED loko: mavo mafana fahazavana (3200k) & fotsy andro mazava (6500k)
Glass size: 598mm (L) * 498mm (H) (23.54 "* 19.6");
Product size: 600mm (L) * 180mm (E) * 530mm (H) /23.62 "* 7,08" * 20,86 ";
Mirror Weight: momba ny 5kg
Fonosana Details: EPE sombin-javatra + Box Package
Hollywood Vanity Mirror Amin'ny Jiro
lehibe Size Hollywood Vanity Mirror
Vanity Mirror Tabletops nidina faingana Makeup Amin'ny 9 L ...
Hollywood nidina faingana Vanity Mirror amin'ny nitondra UV Nai ...
Hollywood Vanity Mirror amin'ny Hitany takamoa, Tableto ...
Hollywood Style nidina faingana Tabletop Makeup Mirror, ...
Araho @Beautmeclub tao amin'ny Facebook ho an'ny tolotra farany
FIVORIANA & FAMPIASAZANA
Mila fanazavana fanampiny? Mba andefaso olona antsika mba handamina olana momba ny BEAUTME misy vokatra.
© 2010-2020 BEAUTME. Zo rehetra voatokana.
Hot Products , Sitemap , DIEM Mobile
Makeup Mirror sy Fahazavana ny kiboriny, Vanity Mirror sy Fahazavana ny kiboriny, Vanity Light takamoa , Mirror sy Fahazavana ny takamoa .